काठमान्डौमा डेंगु परिक्षन गर्ने १२ जना चिकित्सकनै डेंगु बिरामी परेपछि ,, – Ranga Darpan
काठमान्डौमा डेंगु परिक्षन गर्ने १२ जना चिकित्सकनै डेंगु बिरामी परेपछि ,,
भदौ २३, काठमान्डौ – विभिन्न ६७ जिल्ल्ला हुँदै हाल अहिले डेंगुले काठमान्डौमा माहामारी लिने खतरा देखिएको छ ।डेंगुबाट विभिन्न जिल्लामा प्रभावितहरु दैनिक बाधको क्रममा छन ।
हाल सम्म डेंगुका कारण ५ जनाको ज्यान गैसकेको छ ।अहिले डेंगुको संकामा उपचार गराउने जाने जति आधामा डेंगु देखिन थालेको चिकत्सक बताउछन ।
आइतबार एकैदिन शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पता, टेकुमा ३६३ जनाको डेंगु परीक्षण गरिएको थियो, जसमध्ये १९४ जनामा संक्रमण भेटिएको सूचना अधिकृत रुपनारायण खतिवडाले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, शनिबार २९६ जनाको परीक्षण गराएकोमा १४४ जनामा डेंगु संक्रमण फेला परेको थियो ।दैनिक ४ सयजनाभन्दा बढी बिरामी परीक्षण गराउन आउने गरेको र भदौ १५ यता आधा बिरामीमा डेंगुको संक्रमण फेला परेको उपचारमा संलग्न शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालका डा. शेरबहादुर पुनले बताए ।
डेंगुले चितवनका स्पतालपनि बिरामीले भरिभराउ छन् जबकी बैशाखदेखि साउनसम्म ५२८ जना बिरामीमा डेंगुको परीक्षण गरिएको थियो, जसमध्ये ८५ जनामा मात्र संक्रमण भेपछएको थियो ।
तर भदौ महिना यता भने डेंगुका बिरामी हवात्त बढेका छन् भदौ १ गतेदेखि २२ गतेसम्म २ हजार ६८० जनामा डेंगु परीक्षण गरिएको थियो । उनीहरु मध्ये १२ सयभन्दा बढीमा संक्रमण फेला छ ।
डेंगु रोगबाट संक्रमित २३ जनाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने भर्ना भएका मध्ये १२९ जना उपचार गराएर घर फर्किसकेक छन् । अन्यलाई घरमा नै आराम गरेर नियमित औषधी खाना सल्लाह दिएर पठाइएको छ ।
जेठमा पूर्वको धरानबाट डेंगुले महामारीकै रुप लिएको थियो धरानमा अधिले सम्म डेंगु नियन्त्रण हुन सकेको छैन । अहले डेंगु विभिन्न जिल्लमा फैलीएको छ काठमान्डौ विभिन्न उपत्याकाबाट आएका विभिन्न बिरामीमा डेंगु देखिएको छ उनीहरुलाई विहान ८ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म बिरामी हेर्दै आएका डा. पुनले दिनभरि नै बिरामीको चाप एकैनास हुने गरेको बताउछन ।
डेंगु रोगका बिरामीको उपचार गराउँदै आएका टेकु अस्पतालका चिकित्सकसहित १२ जना कर्मचारी पनि डेंगुबाट संक्रमित भएका छन् । अस्पतालका कन्सलटेन्ट फिजिसियन एक जना र मेडिकल अफिसर दुईजना सहित १२ कर्मचारीमा डेंगुको संक्रमण देखा परेको छ ।
उपचारपछि डेंगुबाट संक्रमित ६ जना कर्मचारी काममा फर्किसके पनि ६ जना भने अझै आराम गरिरहेका छन् । यस्तै मन्त्री, सांसद लगायत पनि डेंगु रोगका कारण विभिन्न अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गराएरहेका छन् ।
डेंगु रोगका बिरामीको चाप बढेपछि टेकु अस्पतालले २ वटा ज्वरो क्लिनिक अर्थात ‘ज्वरो डेक्स’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । ज्वरो आएर उपचार गराउन आउने बिरामीलाई उपचारमा सहजताका लागि हेल्प डेक्सका रुपमा ज्वरो डेक्स सञ्चालनमा ल्याएको सूचना अधिकारी खतिवडाले बताए ।
बिरामीको अत्यधीक चाप बढेपछि ओपीडी कक्षसमेत थप गरिएको उनले बताए । अहिले ४ वटा ओपीडी डेक्स सञ्चालन भइरहेको उनले बताए ।उपचार गराउन आउने बिरामीहरुले समयमा नै रगत, पिसाव लगायतका अन्य परीक्षणको रिपोर्ट आउन ढिलाइ हुने गरेको गुनासो गरेका छन् ।
रगत परीक्षण कक्षमा जनशक्ति अभावका कारण काममा ढिलाइ हुँदा बिरामीले समस्या भोग्नुपरेको छ ।अस्पतालमा ६ वर्षयताकै डेंगु रोगका बिरामी उच्च भए पनि यसलाई डेंगुको त्रासकै रुपमा लिन नहुने शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका सूचना अधिकृत खतिवडा बताउँछन् ।
विगतका वर्षभन्दा बिरामीको संख्या बढी नै देखा परे पनि उनले यसलाई चेतनाको वृद्धिले गर्दा मनोवैज्ञानिक असर देखिएको खतिवडाको तर्क छ ।ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, शरीरमा मसिना बिमिरा आउने, शरीरको पछाडिको भाग दुख्नेलगायतका लक्षण देखिएमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने चिकित्सकको सुझाव छ ।
डेंगु रोगबाट बच्नका लागि लामखुट्टेको नियन्त्रण गर्नुपर्ने नजिक रहेका खाल्डा खुल्डी पूर्ण पर्ने खाडलमा पानि जम्ननदिने जस्ता कार्य निरन्तर गर्न चिकित्सक बताउछन।
रवि लामिछानेलाई तत्काल पक्राउ गरि थुनामा राख्न उच्च अदालतमा निवेदन,,
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ र प्रचण्डबीच भेटघाट,,